Sina: Mpanoratra tantara anaty aterineto nosamborina fa hoe namoaka zavatra mamoafady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2010 6:33 GMT
Mpanoratra tantara iray anaty aterineto, Yuan Ping (solon'anarana), no nosamborin'ny polisin'ny tanànan'i Dongguan fa hoe namoaka zavatra mamoafady tamin'ny 26 Septambra.
Araka ny tatitra navoakan'ny Southern Metropolis, dia mpampianatra amin'ny ambaratonga faharoa ao amin'ny tanànan'i Shunde, faritanin'i Guangdong ilay mpanoratra tantara. Teraka tamin'ny 1981 ary nivoaka avy tao amin'ny Departemanta Sinoa momba ny Teny ao amin'ny Anjerimanontolon'i Hunan momba ny Siansa sy ny Teknolojia.
Nanomboka nanoratra tantara anaty aterineto tao amin'ny seha-pifanakalozan-dresaky ny Tianya izy tamin'ny Jona 2009. Ny lohateny tena nomena ny tantara dia ny hoe “Ny fatoritoriana tao Dongguan tamin'ny taona 80 tany ho any – Sleeping in Dongguan in the 80s – 《80年代———睡在东莞》. Nandany 4 volana i Yuan Ping mba hanoratana fizarana 155 sy teny 390.000 tao amin'ilay seha-pifanakalozan-dresaka. Ny tantara dia mikasika ny orinasa manao ireny Sauna ireny ao Dongguan ary notantaraina tamin'ny endrika ho toy ny tena izy. Tena nalaza teo anivon'ireo mponin'ny aterineto ilay tantara ary mihoatra ny 10 ireo mpanonta boky no nanao izay hanatonana an'i Yuan Ping ho fanontàna ilay boky. Tamin'ny fandinihana faramparany an'ilay boky, nilazàna i Yuan Ping mba hamàfa ny sasantsasany tamin'ireo lohahevitra mafampàna ary ny lohatenin'ilay tantara nanjary hoe “ Ny fiainana tao Dongguan – Being in Dongguan” 《在东莞》.
Voatàna noho ny resaka heloka bevava amin'izao fotoana izao i Yuan Ping ary ireo mponin'ny aterineto dia miezaka ny “hamonjy” ilay mpanoratra amin'ny alàlan'ny fanapariahana ny vaovao aty anaty aterineto.
Mpisolovava iray avy ao Beijing, i Zhou Ze, no nanazava tamin'ny mpanadihady avy ao amin'ny Southern Metropolis fa ny lahatsoratra manana ny lanjany eo amin'ny literatiora dia tsy tokony ho raisina ho lahatsoratra mamoafady ary ny fandanjalanjana azy dia tokony ho ny matihanina fa tsy ny polisy no hanao izany. Mpanoratra tantara anaty aterineto iray isan'ny malaza i Murong Xuecun izay nilaza fa raha mitombina ny fiampangana ny tantaran'i Yuan Ping ho mamoafady, marobe ireo mpanoratra tantara anaty aterineto no hiatrika fiampangana ho nanao heloka bevava, satria raha ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina dia feno herisetra sy zavatra mamoafady. Ny mpandrindra ny seha-pifanakalozan-dresaka literatioran'ny Tianya koa dia nilaza fa raha feno vetaveta ny tantara nosoratan'i Yuan Ping, tsy ho namela azy iny havoaka ry zareo.
Dongguan dia ao amin'ny faritanin'i Guangdong. Malaza amin'ny firoboroboan'ny indostrian'ny fivarotan-tena ilay tanàna.
Mediam-bahoaka 10 ora izay